Ogaden News Agency (ONA) – Go’aamadii kasoo baxay Shirkii OYSU N. America.
Go’aamadii kasoo baxay Shirkii OYSU N. America.
Posted by ONA Admin	/ June 27, 2012
Shirkii Mudada Sadexda cisho uga socda ururka Midowga Dhalinyarada iyo Ardayga Ogadenia Gobalka Minnesota ee carliga maraykanka ayaa maalintii Axada lagusoo gabagabeeyay wadatashi iyo sidii loo hormarinlahaa hawlaha ururka dhalinyarada ee qaarada Waqooyiga America (North America). Shirkan oo muhiimadiisu ahayd in dhalinyarada kasoo qaybgashay shirkan oo ka kala timid gobalada intooda badan ay kukala faa’iidaystaan, iskuna buraarujiyaan maadaama ay dhalintu tahay hormuudka shacabka xaalada guud ee uu kusuganyahay wadanka Ogadenia. Waxaa lagu soo xidhay qorshii sanadlaha ahaa ee ururkasta muujiyay inay kaalin wax ku ool ah ka qaateen qorsho sanadeedka guud ee ururka. OYSU N. America ayaa shirkan kuxusay sanadguuradii labaad ee kasoo wareegtay xiligii magaca iyo muruqa lamideeyay dhamaan dhalinyarada reer Ogadenia ee aduunka ka jirtay lana magacbaxday OYSU.
Iskusoo wada duuduuboo shirka OYSU N. America ayaa waxaa kasoo baxay go’aamo muhiim ah.
1. Xoojinta halganka xaqa ah ee shacabka reer Ogadenia kula jiro gumaysiga madow ee Ethiopia meelkasta iyo markasta.
2. Inay Caalam waynaha sida saxaafada, siyaasiinta iyo ha’adaha xuquuqul insaanka usoo bandhigaan tacadiyada, kufsiga, dhaca, iyo midabtakoorka, jidhdilka, Xadhiga, ka jira Ogadenia.
3. In Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenia ee Qaarada waqooyiga America laamahiisa urur hoosaad la balaadhiyo, loona askumo wadashaqayn joogta’ah , si halganka shacabka reer Ogadenia kujiro ay dhalinyaradu hiil iyo hooba ula garab istaagto, kaalin laxaad lehna uga qaataan.
4. In shirar badan loo qabto oo joogta ah dhamaan siyaasiyiinta Maraykan iyo hay’adaha udooda dadyowga dulman laguna baraarujiyo xasuuqa iyo gumaadka kasocda Ogadenia.
5. Dhalinyarada Jaamacadaha oo lagu abaabulo inay shirar ay ku casuumayaan macalimiinta iyo ardayda ay ku qabtaan jaamacadaha iyo iskuulada waxbarasho, taas oo lagu barayo ururka waynaha OYSU, kadibna lagusoo bandhigayo xasuuqa qarsoon ee ka socda Ogadenia.
6. In si wada jir ah oo heer qaaradeed ah looqabto muxaadirooyin lagu abaabulayo shacabwaynaha Somalida Ogadenia.
7. In sida ugu haboon loo hirgaliyo Saxaafad, sida TV, Radio iyo shabakada internet ka oo ku hadlidoonta codka OYSU-N. America.
Shirwaynaha Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Soomaalida Ogadenia wuxuu baaq u dirayaa in dhamaan shacabwaynaha S. Ogadenia ay gacmaha isu qabsadaan sidii ay uga bixilahaayeen dhibaatada Gumaysiugu dhakhsaha badana looga qaado cunaqabataynta ku abaaday ee xukuumada kaligii taliye Melez dusha ka saartay shacabka S. Ogadenia. Shirku wuxuu ku baaqayaa in si shuruud la’aan ah loosiidaayo shacabka aan waxba galabsan ee sida xaqdarada ah uga buuxa jeelasha gobalada oo dhan sida jeel Ogadenia (jigjigaga K. Taliye Melez Zanawi.
Wuxuu shirku hay’adaha iyo wadamada reer galbeedka ugu baaqayaa in si xornimo iyo cadaaladi ku dheehantahay loo baadho xadgudubyada ka baxsan xuquuqda aadanaha oo maalin walba si joogta ah uga socda gobalada dalka Ogadenia, sida).
Waxaa ururka OYSU N. America cambaareynayaa falalka argagixisinimada leh ee xukuumada Ethiopia kula kacayso shacabka somalida Ogadenia, sida Kufsiga, Dhaca iyo boobka xoolaha shacabka, Xadhiga iyo Jidhdilka. Waxaan sidoo kale cambaarayn lamid ah usoo jeedinaynaa inta gacanta kusiinaysa gumaadka shacabka aan waxba galabsan ee S. Ogadenia oo iyagu fulinaya rabitaanka gumaysiga aan naxayn.